Iintengiso zeVidiyo eziSelfowuni zimalunga neBali ngaphandle kweNtengiso Martech Zone
Iintengiso zeVidiyo eziSelfowuni zimalunga neBali ngaphandle kweNtengiso
Google nje ikhuphe iziphumo zolingo olutsha iyamangalisa kwaye kufuneka ijongwe nguye nabani na ofuna ukwandisa ukufikelela kwayo kwividiyo nakwisixhobo esiphathwayo. Ukubeka ngokulula, imodeli yentengiso yobuso bakho yezolo ayisebenzi kwisixhobo esiphathwayo.
Ukusebenza noMbethe weNtaba, I-BBDO ivelise iividiyo ezintathu ezahlukeneyo. Okokuqala kwakubeka intengiso kumabonwakude kwisixhobo esiphathwayo. Okwesibini ukuphosa ukubekwa kwentengiso kwangoko kubabukeli abahambahambayo abaza kuphuma. Ividiyo yesithathu ayikhange ityhale imveliso, kodwa ibali, eliphumela kuyo I-26% yababukeli abahambahambayo ubukele ividiyo kunye ngaphezulu kwesiqingatha sabo bekhumbula uphawu.
Ukuba oku kubonakala kungaphawuleki… gcina engqondweni ukuba ulingelo lwesithathu Imizuzwana engama-30 ubude kunabanye!
Amathuba amathathu afunyenwe novavanyo
Izinto ezingalindelekanga zinokuba namandla. Abantu baya kuhlala nawe.
Thatha ixesha lebali lakho. Suku jam nje kwibrendi yakho ngaphambi kokuba bawele.
Ayidingi kujongeka ngathi yintengiso yokuhambisa uphawu lwakho.
"Eyokuqala" isebenze njengolawulo kwilinge likaGoogle. Yindawo yesibini enemizuzwana engama-30 eneenkwenkwana ezintathu ezithatha iDew Kickstart, ziqale ukudanisa, nayo yonke into esegumbini elingaphantsi komhlaba — ukusuka kwisitulo esigcweleyo ukuya kwinja — kungena. Emva koko abafana baphuma bayokulandela nantoni na elandelayo.
Esi sibhengezo sentengiso sesibini semizuzwana engama-31 siqala ngemveliso enkulu, enesibindi kunye nokubala ukubala, ukubonisa ukuba into ethile epholileyo iza kwenzeka. Ababukeli ke baphoswa embindini wesenzo kwaye ibali liyaqhubeka ukusuka apho.
"Ukuzonwabisa okumsulwa" kubuyisa ababukeli phakathi kwentshukumo kungekho mculo okanye nayiphi na into eyenzekayo. Emva koko umculo ukhaba ngaphakathi kwaye intengiso ibonisa izinto ezahlukeneyo zokudanisa. Kude kakhulu kuneentengiso ezimbini zokuqala kwimizuzu eli-1, imizuzwana engama-33.
tags: bbdoiintengiso zikaGoogleGoogle +Iintengiso zevidiyo ezihambayoIntengiso yevidiyo ephathekayoumbethe wentaba
Uyilo oluPhendulayo kunye neNdawo yokuKhangela ngokuKhangela okuShukumayo